Dalalka Somalia iyo Kenya oo ku heshiiyay Iskaashi dhinaca Sir-doonka ah |
Dalalka Somalia iyo Kenya oo ku heshiiyay Iskaashi dhinaca Sir-doonka ah
order Malegra online cheap, generic Zoloft. Warbixin lagu daabacay wargeyska Kenya ka soo baxa ee Daily Nation ayaa lagu sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhinaca sirdoonka, si weerarrada ay Al-shabaab ka geysnayso labada dal looga gaashaanto.
Heshiiskan dhinaca sirdoonka ah ayaa ku yimid kulan ay magaalada Nairobi ku yeesheen ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Shiikh Axmed iyo William Rugo oo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya.
“Waxaan ku heshiinnay in Somalia iyo Kenya ay si dhow iskala shaqeeyaan arrimaha sir-doonka; waayo waxaana nahay laba dal oo daris ah,” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Kenya, William Ruto oo warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi.
Heshiiska dhanka sirdoonka ah ee ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu soo beegay xillli ay xoogag ka tirsan Al-shabaab laba habeen oo isku xigta ay weerarro ka geysteen magaalada xeebta ku taalla ee Mpeketoni, halkaasoo ay ku dileen 63-qof, dhismayaal ay ku jiraan kuwa dowladana ay ku gubeen.
Weerarkaas ayaa waxaa sheegatay Al-shabaab, iyagoo xusay inuu ahaa mid ay ugu aargudayeen wadaaddo lagu dilay magaalada Mombasa, balse hadal uu warbaahinta siiyay madaxweynaha Kenya ayuu ku sheegay in weerarkaas uu ahaa mid ay abaabuleen siyaasiyiin Kenyan ah.
Dalka Kenya ayaa waxaa Soomaaliya kaga sugan kumannaan ciidamadiisa milateriga ka tirsan, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka AMISOM, waxaana uu heshiiskan yimid iyadoo labadan uu muran siyaasadeed u dhexeeyay bilihii lasoo dhaafay.
William Ruto ayaa shalay oo Khamiis ahayd sheegay in Kenya aysan marna kala baxay ciidamadeeda Soomaaliya, isagoo xusay in ka bixitaankooda ay ku xiran tahay Soomaaliya oo xasisha.